Nongedzo kune Kutaurirana Dhizaini Yako Yako Chatbot - Kubva Landbot | Martech Zone
MaChatbots anoenderera mberi achiwedzera kuwanda uye nekupa ruzivo rwakawandisa kune vashanyi vesaiti kupfuura zvavakaita kunyange gore rapfuura. Dhizaini dhizaini iri pamoyo peyese inobudirira chatbot kutumirwa ... uye kutadza kwese.
MaChatbots ari kuisirwa otomatiki kutungamira kutora uye kugona, rutsigiro rwevatengi uye inowanzo bvunzwa mibvunzo (FAQs), onboarding otomatiki, zvigadzirwa zvigadzirwa, manejimendi manejimendi manejimendi uye kuunganidza, ongororo uye mibvunzo, kubhuka, uye kuchengetedza.
Zvinotarisirwa nevashanyi vesaiti zvakura kwavanotarisira kuwana zvavanoda uye vokubata kana bhizinesi rako zviri nyore kana vachida rubatsiro rwakawedzerwa. Dambudziko kumabhizinesi mazhinji nderekuti huwandu hwekutaurirana hunodiwa kupepeta mukana chaiwo unowanzo kuve mudiki - saka makambani anowanzo shandisa mafomu ekutungamira kuyedza kusarudza mikana yavanofunga kuti iri nani voregeredza zvimwe zvese.
Mafomu ekutumira mafekitori ane kudonha kukuru, asi… time response. Kana iwe ukasapindura kuchikumbiro chese chakakodzera nenzira yakakodzera, uri kurasikirwa nebhizinesi. Kutaura chokwadi, inyaya ine saiti yangu. Nezviuru zvevashanyi pamwedzi, ini handigone kutsigira kupindura kumubvunzo wese - mari yangu haitsigire izvozvo. Panguva imwecheteyo, zvakadaro, ndinoziva kuti ndiri kurasikirwa nemikana inogona kuuya kuburikidza nesaiti.
Chatbot Simba uye Utera
Ndicho chikonzero makambani ari kusanganisira chatbots. Chatbots ane masimba uye kusasimba, zvakadaro:
Kana iwe ukanyepera kuti chatbot yako ndeye munhu, mushanyi wako anozozviona uye iwe unobva warasa kuvimba kwavo. Kana iwe uchizonyorera rubatsiro rwebhoti, rega mushanyi wako azive kuti ivo vari bot.
Mazhinji mapuratifomu e chatbot anotyisa kushandisa. Nepo ruzivo rwavo-rwakatarisana nevashanyi rungave rwakanaka, kugona kunyatso kuvaka uye kuendesa bot inobatsira ndeyekurota. Ndoziva… Ndiri murume wehunyanzvi ane zvirongwa uye haakwanise kufunga mamwe eaya masisitimu.
Kukurukurirana sarudzo yemiti inofanirwa kuongororwa zvakanyatsogadziriswa uye kugadziridzwa kuti uvandudze huwandu hwekushandurwa pamwe neako bot. Hazvina kukwana kurova bot kumusoro nemibvunzo mishoma yekufanirwa - unogona zvakare kungoshandisa fomu, ipapo.
MaChatbots anoda kusanganisa emhando yepamusoro mutauro kugadzirisa (NLP) kuti unzwisise zvakakwana kukurumidza uye manzwiro emushanyi wako, zvikasadaro, mhedzisiro yacho inoshungurudza uye ichaendesa vashanyi kure.
MaChatbots ane parinogumira, uye anofanirwa kumisikidza ruoko kuti abvise hurukuro kune vanhu chaivo pane vashandi vako kana zvichidikanwa
Chatbots inofanirwa kupa yako yekutengesa, kushambadzira, kana matimu evashandi.
Mune mamwe mazwi, chatbots inofanira kuve nyore kwauri kuti utore mukati uye uve neakasarudzika mushandisi ruzivo kunze. Chero chipi zvacho chishoma chichawira pasi. Sezvineiwo zvakakwana ... izvo zvinoita kuti chatbot ibudirire ndiwo mabumbiro akafanana anoita kuti hurukuro ibudirire pakati pevanhu vaviri kana vanopfuura.
Unyanzvi hwekugadzira uye kugadzirisa kudyidzana kweyuu chatbot nevashanyi kunozivikanwa se dhizaini yekutaurirana.
Nongedzo yeKukurukurirana Dhizaini
ichi infographic kubva Landbot, chatbot chikuva chakanangana nekutaurirana dhizaini, inosanganisira kuronga, kufanotaura, uye kuuraya kukuru kwekutaurirana chatbot zano.
Dhizaini dhizaini inosanganisa kunyora, izwi uye odhiyo dhizaini, ruzivo rwevashandisi (UX), dhizaini dhizaini, kudyidzana dhizaini, uye dhizaini yekuona. Iyo inofamba kuburikidza nembiru nhatu dzekutaurirana dhizaini:
Mushandira pamwe - iko kushandira pamwe pakati pe chatbot nemushanyi kunogonesa kushandiswa kwemashoko asina kujeka uye mapfupi ekukurukurirana kusimudzira hurukuro.
Kutora-Kutora - kutora nguva kutora-pakati pekambani uye mushanyi kwakakosha kugadzirisa kusanzwisisika uye nekupa hurukuro inoshanda.
Context - nhaurirano dzinoremekedza mamiriro epanyama, epfungwa, uye mamiriro emushanyi anobatanidzwa.
Kuronga yako chatbot, iwe unofanirwa:
Tsanangura vateereri vako
Tsanangura iro basa uye chatbot mhando
Gadzira yako chatbot persona
Rondedzera basa rayo rekukurukurirana
Nyora yako chatbot script
Kuti uite hurukuro inoshanda pakati pebhoti nemushanyi, pane mushandisi interface zvinhu zvinodiwa - zvinosanganisira kukwazisa, mibvunzo, zvirevo zvine chekuita neruzivo, mazano, kubvuma, mirairo, kusimbiswa, kukumbira ruregerero, mamaki ehurukuro, zvikanganiso, mabhatani, odhiyo uye zvinoonekwa.
Heino izere infographic… Iyo Yekupedzisira Nhungamiro yeKukurukura Dhizaini:
Landbot ine yakasarudzika yakajeka posvo yekuti iwe unogona sei kuronga uye kuendesa yako chatbot pane yavo saiti.
Verenga Landbot Chinyorwa Chizere nezveKukurukura Dhizaini
Landbot Vhidhiyo Ongororo
Landbot inopa masimba kumabhizinesi ekugadzira zviitiko zvekukurukura ne zvakapfuma UI zvinhu, yemhando yepamusoro yekufambisa kwekushandisa, uye chaiyo-nguva kubatanidzwa.
Webhusaiti chatbots ari Landbot's masimba, asi vashandisi vanogona zvakare kuvaka WhatsApp uye Facebook Messenger bots.
Edza Landbot Nhasi
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Landbot.
Tags: affiliateBotchatbotchatbot dhizainichatbot kurongachatbot uichatbot mushandisi interfacechinyorwanhauriranodhizaini yekutauriranamushandira pamwefacebook messengerlandbot
Simbisa WordPress 'Yemukati Siti Kutsvaga Kugona neJetpack's Advanced Kutsvaga